Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Jigme Tshewang · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2014 20:00 GMT
Iray amin'ireo fitsipika mpitari-dalana an'i Jigme Tshewang izay mpikambana ao amin'ny tetikasa fandraisam-peo karakarain'ny Foibe Bhutan Hoan'ny Media sy ny Demaokrasia, tetikasa nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny Rising Voices 2013 io. Amin'ny maha-mpianatra ao amin'ny Oniversite Royal ao Bhutan ao amin'ny Sampam-pampianarana Media azy, nandray anjara tamin'iray amin'ireo atrikasa fandraisam-peo notontosaina tao amin'ny Kolejy Sherubtse, Kanglung , Distrikan'i Tashigang i Jigme, izay nianarany momba ny fototra famoronana rafi-tantara, fandraketana ary ny famoahan-dahatsoratra.
Mikasika ny fijerin'ny olom-pirenena Bhotaney momba ny fitsarana adin-tany tao Gyelposhing, izay naha-voampanga tompon'andraiki-panjakana ho nahazo ny tanin'ny mponina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fandraisam-peon'i Jigme. Nahita i Jigme fa « marobe ireo olona nizara ny fijeriny fa ara-drariny ny fitsarana satria fantatr'izy ireo fa tokony hanjaka ny lalàna. Nizara ny alahelony ihany koa ireo olona sasany satria resy ny kandidàn'izy ireo tamin'ny fifidianana solombavambahoaka noho ity raharaha ity. “Mbola eo an-dalam-panitsiana sy famoahana ao amin'ny habaka ny fandraketam-peo .
Raha ny fandraisam-peo no tena mahaliana voalohany an'i Jigme, niroboka tao anatin'ny tontolon'ny bilaogy sy ny tambajotra sosialy ihany koa izy. Mitantara ny eritreriny manokana sasany ny bilaoginy, ary misioka ao amin'ny @jigmetshewang ihany koa izy.